आज श्रावण १४ गते बिहिबार, कस्तो रहला तपाईंको दिन ? हेर्नुहोस् राशिफल ! - kageshworikhabar.com
आज मिति वि. सं. २०७८ साल श्रावण १४ गते। बिहिबार । तपाईंको आजको राशिफल
शारीरिक तथा मानसिक रुपमा स्वस्थ हुनु हुनेछ। चिसोबाट बचेर रहनुहोला । धार्मिक कार्यमा खर्च हुनेछ । व्यापारमा ठगि हुनसक्छ सचेत रहनू होला । आमाको स्वास्थ्यमा समस्या आउनसक्छ । निर्णय लिने शक्ति कमजोर हुँदा दुबिधामा परिने छ ।
व्यापारमा वृद्धि हुनेछ । आफन्त तथा परिवारसँग दिन रमाइलोमा बित्नेछ । व्यापारमा लभ हुनेछ । रमाइलो यात्रा हुनेछ । महिला वर्गबाट लाभ हुनेछ । जीवन साथीसंगको प्रेम तथा लगाव बढ्नेछ । साथी भाइ तथा ठुला व्यक्तिबाट लाभ हुनेछ। शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ।
गरेका कार्यहरु सफलतापूर्ण सम्पन्न हुनेछ । घर कार्यालयमा अनकुल समय हुदा मन प्रशन्न हुनेछ । मान सम्मान बढ्ने छ । आफूभन्दा ठुलाको सहयोग मिल्नेछ । गृहस्ती जीवन आनन्दमय हुनेछ । उत्तम संसारिक शुख प्राप्त हुनेछ । काममा भएको अवरोध हट्ने छ ।
शारीरिक तथा मानसिक रुपमा स्वस्थ हुनुनहुनेछ । भाग्य वृद्धि हुनेछ । वैदिशिक शुभ समाचार मिल्नेछ । धार्मिक यात्रा हुनेहुदा मन प्रशन्न हुनेछ । परिवार संगको सम्बन्ध सुमधुर हुनेछ । वैदिशिक योजना बनाउन शुभ समय रहेको छ ।
स्वास्थ्यको बिषेस ध्यान दिनुहोला । खर्च बढ्न सक्छ । साथि भाइको सहयोग मिल्नेछ । परिवारको सदस्यसँग विदाद हुनसक्छ । घर बाहिर खाना खानाले स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ । मनमा नकारात्मक विचारको हाबी हुनसक्छ ।
सामाजिक कार्यमा लाभ हुनेछ । स्त्री वर्गबटा लाभ हुनेछ । दाम्पत्य जीवनमा शुख छाउने छ । नयाँ वस्त्र प्राप्त गर्ने योग बनेको छ । विपरित लिंगी प्रति आकर्षण बढ्नेछ । पार्टनरमा गरेको काममा विवाद हुनसक्छ ।
नोकरी पेशा गर्नेको लागि अत्यन्तै शुभ दिन रहेको छ । प्रतिस्पर्धीहरुको अगाडि विजय भइने छ । स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ । बौद्धिक चर्चा बढ्नेछ । पढाईमा सफलाता मिल्नेछ । परिश्रमको फल प्राप्त हुनेछ । सन्तानको शुभ समाचार मिल्ने छ ।
शारीरिक तथा मानसिक रुपमा थकान महसुस हुनेछ । परिवारमा कलहको वातारण हुँदा मन उदास हुनेछ । निन्द्राले सताउने छ । आमाको स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ । सामाजिक रुपमा अपमानित हुन सक्ने हुँदा सचेत रहनु होला ।
दिन सुखमा बित्नेछ । अनकुल परिस्थिति हुने हुँदा दैनिक कार्य सरल हुनेछ । मन प्रशन्न हुनेछ। व्यापारमा लाभ हुनेछ । नयाँ कामको थालनीको लागि शुभ समय रहेको छ । पढाईमा सफलता मिल्नेछ ।
निर्णय गर्ने शक्तिको अभाव हुनेछ। स्वास्थ्यमा सामान्य समस्या आउनसक्छ। बोलीमा बिशेष ध्यान दिनुहोला अन्यथा विवादमा पर्न सकिन्छ । आफन्तसँग विवाद हुनसक्छ । काममा सफलता मिल्नेछ । सन्तान शुख मिल्नेछ । पढाई अवरोध पैदा हुनसक्छ ।
नायाँ कामको थालनीले लाभ हुनेछ । साथी भाइसँग मिठो भोजन हुनेछ । मन प्रशन्न हुनेछ । धार्मिक कार्यमा धन खर्च हुनेछ । यात्राको योग बनेको छन् । बाबुको सहयोग प्राप्त हुनेछ । पढाईमा मन लाग्ने छैन।
मनमा खुशी छाउने छ । काममा जोश जाँगर बढ्ने छ । नयाँ कामको थालनीको लागि उचित समय रहेको छ । धार्मिक तथा मांगलिक कार्यमा सहभागी हुने अवसर मिल्नेछ । सहयोगीबाट लाभ हुनेछ । दाम्पत्य जीवन खुशी र आनन्दित हुनुहुनेछ ।
Previous articleसिड्नीमा फेरि चार हप्ता लकडाउन थप
Next articleदेशभर बदली र वर्षा, गण्डकीबाहेकका प्रदेशमा ‘भारी वर्षा’ को सम्भावना
आज असोज ०७ गते बिहिबार, कस्तो छ तपाईंको राशिफल ?
आज असोज ६ गते बुधबार, तपाईंको दिन कस्तो रहनेछ ? हेर्नुहोस् राशिफल
आज असोज ०५ गते मंगलबार, कस्तो छ तपाईंको दिन ? हेर्नुहोस् राशिफल